Waa wax weyn xaqiiqada in la yidhaahdo, Si kastaba ha ahaatee tannic waxaa laga yaabaa in; qayb weyn oo naga mid ah ma aha essayists laga cabsado. Waxaa shaki la'aan curinta waa tiir ka mid ah shaqsiyaadka aan aad u badan. Waxaa la qiimeeyey in gaar ah agagaarka 10% ee dadka oo dhan keyd in qaabka tababarka oo dhan si dhab ah ka badan filayo in tallaabada curinta. kale waxay 90% baahan yahay in ay sii wadaan iyada oo mid ka mid ah qaab-dhismeedka kale ka dib oo dhan markii ay dugsiga, dagaal Bluagrana ayaa si ay u sameeyaan oo aan ka yarayn hal article la aqbali karo. Halkaa marka ay marayso marka understudies sida heli in ay leeyihiin a shaqooyinka yar shaqada ku qoran jadwalka, miisaanka soo jeedin kartaa in ay gebi ahaanba halis ah; tani waa ururada caawimaad meel warqad online curinta u soo galeen sawirka.
Inta badan la mid ah sida aad samayn la motor auto bajin ama go'an soocay TV, waa joogto ah na in la raadiyo gargaar ee ku saabsan wax aad u heshaan xoogaa adag tahay in la sameeyo iyo waxa aad u baahan taageero aad u yaqaana. Arinka u muhiimsan ee la qaadan hindisaha curinta caawimo waa in aad laga yaabaa in la ogaado page a on Yellow Pages faafinta warbixinta curinta caawimo; tani waa sababta loo helo ururada caawimaad warqad curinta sharci jirsado galay hawl shaki for guud ahaan understudies. keyd kasta oo doondoontaa article khabiir curinta caawimaad waajib ah in la ogaado meelaha ugu fiican si aad u baadhid sort this ee caawimo; muhiimad ka heli iyo inay la socdaan, kuwaas oo meelaha aasaasiga ah iyo waxaad ogaan doontaa inay ka caawiyaan si habboon u soomi iyo kharashka macquul ah. Qayb ka mid ah meelaha ugu fiican si aad u hesho warbixin curinta ka mid ah:
ururada hadalkay curinta Proficient: Iyadoo shaki la'aan ah dhammaan ururada aan article curinta la mid yihiin, run ahaantii waxaa jira saxafiyiinta run ahaantii aadka u yaqaana weli la heli karo; halmaantay kuwa uu asagu Dick kasta, Tom iyo Harry inay sameeyaan ayeey shaqo ay ku qoran. Qaado waqti aad sida ugu badan ee loo baahan yahay in la helo urur hufan aamini karo in uu leeyahay dhowr tusaale weyn oo kuwaas oo ka shaqeeya qayb ka mid ah ka sayid shaqo fiican ku qoran. Waxaa shaki la'aan tani waa kaalinta ugu weyn in la ogaado warqad curinta deg deg ah, bixinta maanka yar waxa ay idinka dambeeyaan ayaa ka fiirsaneysa ama ho baruurta jeebka waa.
Meelaha qoran Independent shaqada: Waxaa jira tiro badan oo ah essayists madax banaan meel walba kuwaas oo kor u haya in jidka oo dhan ee shaqooyinka in yimaaddo ciqaabtiisa. Inta badan la mid ah sida aynu ku ool ah ka muujiyay, Kuwan oo dhammu sow essayists madax banaan ka samaysan yihiin wax u dhigma; aad tahay dheeraad ah oo aamin ah fursad off in aad qaadato waqtiga ugu badan ee lagama maarmaanka ah oo ay la kulmaan dhawrka ah macmiilka yar habase yeeshee qalabka ay la soo dhaafay ka hor inta aadan shaqaaleeyaan qof.
Qalin jabiyaan duqsiyo keyd: ma laga yaabaa in aad u ku kalsoon tahay, laakiin waxaa jira understudies graduate badan oo aan isku dhibin lahaa siiyo qaar ka mid ah warqad curinta caawimaad si yar lacagta a. Iyadoo understudies sida laga yaabo in ay adag tahay in ay maamulaan badan, ay yihiin hantida a hufan gaar ahaan on fursad off ah in aad aragto kartaa qof kuwaas oo uu leeyahay qaar ka mid ah macluumaadka ee aad beerta waxbarasho.
« Sida loo qoro A meelayn kuliyadeed WANAAGSAN Qormo ?
Qalmay SII OF OGOLAASHAHA ISTICMAALKA ADEEGYADA QORAALKA Qormo Custom »